Sweden oo ka cabsi qabta in markab dagaal ee Ruushka uu ku qarsoonyahay biyaha Stockholm | Somaliska
Ciidamada difaaca Sweden (Försvarsmakten) ayaa ilaa maalintii jimcaha waxay baaritaan ka wadaan biyaha Stockholm iyadoo looga shakisanyahay in markab Gujis ah uu ku qarsoonyahay halkaasi. Shalay galabtii ayaa shir jaraaid oo ay qabteen ciidamada ay ku sheegeen in ay u malaynayaan in biyaha ku dhow jasiiradaha Stockholm ay ka socoto hawl ay wadaan ajaanib.
Qaar ka mid ah dadka ku nool agagaarka ayaa soo bandhigay sawiro muujinaya wax u eg gujis oo dhex socda biyaha. Wargeyska SvD ayaa qoray in ay heleen warbixin ku saabsan in markab uu leeyahay ruushka uu agagaarka Stockholm ka diray fariin taasoo ku socotay gobolka Kaliningrad ee ruushka uu ku leeyahay bartamaha Yurub.
Ciidamada miltariga Sweden oo isticmaalaya maraakiibta dagaalka iyo diyaarado ayaa si xoog leh u wada baaritaan ay ku samaynaya biyaha Sweden, balse ilaa hada ma aysan helin wax la taaban karo. Haddii ay helaan ayaysan xitaa faahfaahin ka bixinayn maadaama ay hawshooda ku tilmaameen mid qarsoodi ah.
Sweden ayaa bilihii la soo dhaafay walaac ka muujisay daandaansiga ruushka, iyadoo dhowr jeer ay diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay ku soo xadgudbeen hawada Sweden. Inkastoo ruushka iyo Sweden aysan lahayn xuduud dhulka ah, ayay leeyihiin xuduud badda ah. Ruushka ayaa dhul ku leh inta u dhaxaysa Poland iyo Lithuania, halkaasoo saldhig u ah maraakiibtiisa dagaalka.
Awooda difaaca ee Sweden ayaa la dhaliilay, iyadoo mudo 20 sano ah ay dowlada Sweden waday hoos u dhig ay ku samayso ciidamadeeda balse sanadihii dambe oo ay soo badatay xamaasada aduunka ayaa waxaa siyaaday dooda ku saabsan in Sweden ay siyaadiso awoodeeda ciidan. Horay ayaa taliyaha ciidamada Sweden uu qirtay in haddii ruushka uu soo weeraro Sweden ay is difaaci karaan 1 isbuuc oo keliya.
Mid ka mid ah xildhibaanada cunsuriyiinta SD oo isaga baxay xisbiga
Maalinta qaranka Sweden
Asc mudane Wiilashii lasoo weeraray e magalaada Tommellila iyaga xitaa dacawadoodii way socotaa maxkamad ayay fuuleen maalin dhaweyd ee maa nooga so warantaan xaga ay marayso
Cismaan wali says:
October 25, 2014 at 00:10
Kkkkkkkkkk hal isbuuc kulahaa kkkk rabiyoow wadankeena noo hagaaji